चलचित्र – Page2– MediaNP
शनिबार, ११, जेठ, २०७६
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:३४0
काठमाडौँ ,२४ वैशाख । चर्चित हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको आज जन्मदिन रहेको छ । उनी २००७ साल बैशाख २४ गते काठमाडौँको जितपुर फेदीमा जन्मिएका हुन् । उनी आजबाट ६९ बर्षमा प्रवेश गरेका छन् । तर
दोहोरी व्याटलका गायक प्रकाश सपुतको रोमान्टिक जोडी ! यस्तो छ उनको अन्तरजातीय प्रेम र रोचक भागी विवाह
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:२८0
काठमाडौँ । नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा दोहोरी ब्याटल, र बोल माया जस्ता चर्चित गीतहरु गाएर दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल भएका गायक प्रकाश सपुतको प्रेम कथा निकै रोचक रहेको छ । आज भन्दा ११ वर्ष अगाडी
नायिका श्वेता खड्का हस्पिटलबाट डिस्चार्ज, आफ्नो साह्रै ख्याल गरेको भन्दै दिइन् यसरी धन्यवाद
काठमाडौं, २४ वैशाख । नायिका श्वेता खड्का हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएकी छन् । उनको घाँटीमा देखिएको ट्युमर भारतको मेडिक्युब हस्पिटलमा शल्यक्रिया गरिएको थियो । ‘हेलो जिन्दगी’ चलचित्र खेल्न लन्डन उडेकी श्वेता भारतको दिल्लीस्थित अस्पतालमा भर्ना भई उपचार
मनमा बसेका यी युवतीलाई सलमानले दिएका थिए करोडौ पर्ने कार, जान्नुहोस कति थियो मूल्य ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:११0
काठमाडौँ । माया गर्ने व्यक्तिलाई ज्यानै दिने घृणा गर्ने व्यक्तिको नाम नै नलिने अभिनेता सलमानको आदत नै हो । उनी आफुलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई खेदो गर्न कहिल्यै छोड्दैनन् । उस्तै परे ज्यान किन नजाओस् ।
सन्निले छोरा बोकेर हिड्दै गरेको तस्विर भयो राता रात भाइरल
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:१२0
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीले जुम्ल्याहा छोराहरुलाई लिएर हिड्दै गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जुम्ल्याहा छोराहरु सहित भेटिएकी उनको एक छोरा आफैले बोकेकी छिन् भने अर्को छोरालाई उनका सहयोगीले बोकेका छन्
फिल्ममा फ्लप भएका नायकले पाए सुन्दर नायिका, जसको सुन्दरता देखेर जल्ने गर्छन् जो कोही
काठमाडौँ । भाग्यको खेल न हो कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुर्याउँछ थाहा हुँदैन् । कुनै व्यक्ति थोरै प्रयासले सफलको चरम शिखरमा पुग्छ भने केही व्यक्तिको अथक प्रयास पनि चुक्छ । जीवन भोगाइको यो तितो यथार्थ
नायिका साराअलीको बलिउडमा चर्चा नै चर्चा , दिशा पटानीलाई विस्थापित गर्दै गरिन् प्रवेश
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:१७0
काठमाडौँ । चलचित्र केदारनाथबाट चर्चामा आएकी नायिका साराअली खानको चर्चा पछिल्लो समय बढ्दो छ । उनी केदारनाथ पछि चलचित्र सिम्बा बाट झनै चर्चामा आएकी थिइन् । उनी अहिले चलचित्र ‘लभ आजकल २’को छायांकनमा व्यस्त छिन्
चलचित्र ‘विर विक्रम २’को पोखरा र चितवनमा कन्सर्ट सम्पन्न, यस्तो देखियो पल, नाजिर र बर्षाकोे क्रेज ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:४८0
काठमाडौँ । यतिखेर चलचित्र ‘विर विक्रम २’को टिम प्रचार प्रसारमा ब्यस्त छन् । उनीहरु भर्खरै उक्त चलचित्रको चितवन र पोखराबाट प्रचार प्रसार सकेर काठमाडौँ फर्किएका छन् । जहाँ विर बिक्रम २ का टिमले कन्सर्टको माध्यमबाट
नायक दिलिप रायमाझीलाई दोहोरीमा सफलता , बिष्णु माझीको आवाजमा रहेको ‘मान्छे फकाएर आफ्नो हुदैन्’ पछि ‘साइलो’ पनि ट्रेनिङमा
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:५०0
काठमाडौँ । कुनै समयका चर्चित नायक दिलिप रायमाझीले अभिनय गरेको अर्को उत्कृष्ट लोकदोहोरी गीत’साईलो बजारमा आएको छ । यो गीत बजारमा आएको छोटो समयमै अहिले युटुबको ट्रेनिङमा आएको छ । उनले केही समय अगाडि अभिनय
बलिउडका यी चर्चित अभिनेत्रीहरु, जसलाई यति धेरै सुहाउँछ पुलिसको रोल (तस्वीर सहित )
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:५९0
काठमाडौँ । बलिउडमा प्रहरीको भूमिकालाई मुख्य बनाइएका थुप्रै फिल्महरुले राम्रो चर्चा पाएका छन् । फिल्मले मात्र हैन् फिल्ममा अभिनय गर्ने अभिनेता अभिनेत्रीले पनि प्रहरीको भूमिका निकै सुहाएको भन्दै चर्चा पाएका छन् । फिल्ममा अजय देवगन,